Iwo ma7 akanakisa maficha anoshandura vhudzi rebvudzi munguva chaiyo, Emulator.online ▷ 🥇
Iwo ma7 akanakisa maapplication ayo anoshandura vhudzi rebvudzi munguva chaiyo
Anwendung inoshandura bvudzi bvudzi inogona kubatsira zvese kunakidzwa nekunyengedza shamwari dzako uye nekubatsira iwe kusarudza kuti ndeupi mumvuri wokupenda nawo. Aya maapplication anotendera iwe kuti uedze pane kutaridzika kutsva usati waenda kusalon, kazhinji uchinyatsoita. Naizvozvo, pane mukana mushoma wekuzozvidemba.
1. Ruvara rwebvudzi
Bvudzi Ruvara rinopa akasiyana masitayera ekupenda, senge katatu, kusviba, wakura kana pamusoro pebvudzi rose. Kana uchivhura application, mushandisi akatarisana nemufananidzo kubva kamera, asi zvakare zvinokwanisika kushandisa pikicha kubva kunhare mbozha. Ingosarudza iwo mavara pazasi kwechiso.
Pane sarudzo dzakashinga, senge dzakasiyana shades dzegirini, dzepepuru, dzebhuruu uye dzakajairika, senge blonde, brown uye tsvuku. Iko kunyorera zvakare kunokutendera iwe kupatsanura iyo skrini kuti uenzanise mifananidzo mune chaiyo nguva. Kunyangwe isiri yakajeka, ingobata skrini kuti utore pikicha kana kubata ubatise kuti utore vhidhiyo.
Ruvara rwevhudzi (mahara, nekutenga kwe-mu-app): Android | ios
2. Fabby Tarisa
Tsvaga kuti iwe waizotaridzika sei nerudzi rutsva rwebvudzi munguva chaiyo
Fabby Tarisa chiitiko chekuyedza cheGoogle chakagadzirwa chaizvo kuti chishandure bvudzi bvudzi. Iko kushandiswa kwetoni kunoitika munguva chaiyo. Ingobata kiyi uye wotarisa nguva ichinja. Iko kune zvakasarudzika sarudzo, senge tsvukuruka, tsvuku, shava uye grey, kunyangwe iwo mashoma akajairwa iwo, sebhuruu, pink, orenji, nezvimwe.
Kana iwe uchida mhedzisiro, iwe unogona kutora pikicha, muvhavha iri pakati pechidzitiro, uye nekugovana zviri nyore paFacebook, Instagram, Snapchat, pakati pevamwe. Chirongwa hachina kuita kwakaomarara, asi zvakare haina maitiro kana ekugadzirisa zviwanikwa.
Fabby tarisa (mahara): Android | ios
Instagram haisi chaiyo yekushandisa kushandura bvudzi bvudzi, asi ine mafirita akati wandei ayo anotendera iwe kuti ushandise mitsva nyowani munguva chaiyo. Kuti uite izvi, ingo enda kuNhau, pfuura nemugariro bar kubva kurudyi kuenda kuruboshwe, nzira yese kusvika kumagumo. Ipapo iwe uchaona iyo sarudzo Kutsvaga Mhedzisiro, kuti iwe ubate.
Pane iyo skrini inowoneka, enda kune iyo yekukudza girazi icon, iri pamusoro pechidzitiro kurudyi. Mundima yekutsvaga, pinda mazwi senge bvudzi rine mavara o ruvara rwevhudzi uye iwe uchaona dzinoverengeka mafirita sarudzo anopa mabasa
Tamba Dee yaunoda uye ipapo Kuziva. Uchaendeswa kuchinyorwa cheNhau chinyorwa, kwaunogona kutora mifananidzo uye kurekodha mavhidhiyo, sezvaunoita nechero imwe firita.
Mutungamiri Akavanzika Mafirita uye Mhedzisiro mu Instagram Nhau - Ona Maitiro Ekuwana inotsanangura dzidziso zvakadzama.
Instagram (mahara): Android | ios
K-POP yebvudzi simulator
Bvudzi rinokurudzirwa nevhudzi revanyori veSouth Korea K-Pop mimhanzi genre. Iko kunokubvumira enda pikicha kubva kuGallari kana kuitora ipapo. Mushandisi anofanira kutanga asarudza kugerwa obva aenderera mberi kudhaya kuchinja manera.
Kune akati wandei emarudzi esarudzo anowanikwa, kusanganisira ane mafashoni akadai lilac, pink, yepepuru uye girini. Ose magadzirirwo ebvudzi uye neruvara zvinogona kugadziridzwa kuti zvionekwe sezvisikwa sezvinobvira.
Vhudzi (mahara): Android
5. IweCam Makeup
Kunyangwe uchitarisa pamhedzisiro yemhedzisiro, YouCam Makeup ine yepamusoro ficha yekuchinja bvudzi bvudzi munguva chaiyo. Mushandisi anogona kuyedza maviri-mavara masitaera, kuenderana iwo chaiwo mumvuri, kana kuisa imwechete chete mumvuri.
Izvo zvinokwanisika kugadzirisa iko kusimba, kupenya, pamwe nekufukidzwa kwemavara kana kuti yakawanda sei kuti uisanganise kune yayo yekutanga toni. Kana iwe uchida mhedzisiro, iko kunyorera hakubvumiri iwe kwete chete kutora pikicha, asiwo zvakarekodha mavhidhiyo ane firita.
YouCam Makeup (mahara, nekutenga kwe-mu-app): Android | ios
6. Bvudzi dhayi
Bvudzi Ruvara Dhayi rinokutendera iwe kutora pikicha ipapo kana kushandisa imwe inowanikwa muRaibhurari. Ipapo, mushandisi anofanira kusarudza, mumufananidzo, nzvimbo yebvudzi uye obata toni yaanoda kuisa. Iwe unogona kusarudza rumwe ruvara kupenda zvese uye nekuwedzera mamwe mune mashoma tambo.
Kana iwe uchida, iwe unogona kutogadzira rako rako vara uchishandisa sarudzo Wedzera ruvara. Mhedzisiro yacho inogona kuchengetwa parunhare kana kugoverwa mune mamwe mashandisiro.
Bvudzi dhayi (mahara, nekutenga-mukati-app): iOS
7. Ruvara rwebvudzi chinoshandura
Iro Bvudzi Ruvara Changer rine zano rakafanana chaizvo neBvudzi Ruvara Dhayi yeApple. Iko kushandisa kunokutendera kuti ushandise mafoto kubva kuGalari kana kuatora iwo ipapo. Wobva wangobaya paruvara runodikanwa wozoisa pamusoro penzvimbo yebvudzi nemunwe wako. Izvo zvinokwanisika kuisa akati wandei matoni mumufananidzo mumwe uye kunyange kupenda zvimwe zvinhu zvemufananidzo.
Zvakare, mushandisi anogona kuchinja kusimba kwemuvara, zvichiita kuti mhedzisiro ive yechokwadi. Iyo yekushandisa inopa sarudzo dzekugovana mhedzisiro pamasocial network kana kuichengeta pane chishandiso. Iwe unogona kukumbirwa kuti uipe iyo nyeredzi shanu. Haufanire kuita izvi kuti uwane zviwanikwa.
Bvudzi vhudzi chinja (mahara): Android
Bvudzi rakanakisa uye simulators yeruvara kuti uchinje kutaridzika
Iko kunoshandura kunochinja chikadzi chako uye kunoshandura iwe kuita murume kana mukadzi; ona mashandisiro
Mafomu ayo anobatsira nemakeep
Maitiro ekuziva kana iyo iPhone iri yepakutanga kana kunyepa uye isinganyengedzwe
Iwo mapfumbamwe akanakisa webcam zvirongwa zveWindows, macOS, uye Linux
Maitiro ekuziva kana mutambo urikumhanya pane yangu PC
Sei watermark foto nefoni uye PC
8 akanakisa mapurogiramu ekutsvaira paPC
6 mamiriro ekunze maapplication kuitira kuti mamiriro ekunze asakubata iwe nekurinda
8 zvirongwa zvekugadzira mitambo paPC kunyangwe usingazive maitiro ekuronga
10 akanakisa mafoto vanoona kutsiva Windows app
Chokwadi kana nhema nhau: maitiro ekuudza kana nhau dzisiri dzechokwadi kana dzechokwadi
Maitiro Ekutumira Mapikicha uye Mavhidhiyo kune Instagram Nyaya paPC muna 2020
Yekhibhodi haina kugadziridzwa - maitiro ekunetsa uye kugadzirisa dambudziko